Mfe nnyocha ndị e mere na ihe ọ bụla Email Platform | Martech Zone
Tọzdee, Eprel 14, 2011 Saturday, October 29, 2011 Douglas Karr
Ahụrụ m ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbasi mgba ike na nyocha email. Fọdụ ndị na-enye email gbalịrị itinye ụdị n'ime ngwa ha, naanị ịchọpụta na ọtụtụ ndị ahịa email (ịntanetị na apụ) agaghị enye nyocha email ahụ nke ọma. O di nwute, a na-ahazi ozi email mgbe ọ dabara na ike nke onye ahịa email kachasị njọ.
Ebe ndị ahịa email na-enye ohere ịpị njikọ njikọ, ụzọ kachasị mfe iji jide ntuli aka dị mfe ma ọ bụ nyocha site na email bụ site na itinye njikọ dị iche maka azịza ọ bụla. M natara Netflix email nke na - eme nke ahụ:
Ọ dị mma ma dị mfe. Ọ dịghị nbanye dị mkpa (njirimara na-gụnyere na njikọ na gafere ebe peeji nke na-agụta na nnyocha e mere), ọ dịghị ịpị njikọ na mgbe ahụ mepee ọzọ ụdị, ọ dịghị abanye data…. dị nnọọ pịa. Nke ahụ dị ike pịa! Amaghị m ihe kpatara na ndị ọzọ na-ere ahịa (yana ndị na-enye ọrụ email ọzọ) anaghị eji usoro a!